निकै उत्कृष्ट हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ? - Nawalpur Dainik
निकै उत्कृष्ट हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ?
ज्योतिषमा मेषदेखि मिनसम्म कुल १२ राशि उल्लेख गरिएको छ। सबै राशिका व्यक्तिको स्वभाव र बानी फरक फरक हुने गर्दछ। ज्योतिषाचार्य मनिष शर्माका अनुसार केही राशिका व्यक्ति यस्ता हुने गर्दछन्, जसको नेतृत्व क्षमता अन्य व्यक्तिको भन्दा निकै राम्रो हुने गर्दछ।
Prevआफ्नो श्रीमानसँग लागेको भन्दै आरोप लगाएपछि सडक मै पर्यो कु टा कु ट, सासुले बुहारीलाई घर बाट निकालिदिन (भिडियो सहित)
Nextजेठ ०८ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल